ओलीको सत्ता लिप्साका कारण गणतन्त्र समाप्त हुने स्थितिमा : शाक्य- समाचार - कान्तिपुर समाचार
काठमाडौँ — नेकपा (एमाले) माधवकुमार नेपाल समूहकी वाग्मती प्रदेश इन्चार्ज अष्टलक्ष्मी शाक्यले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सत्ता लिप्साका कारण गणतन्त्र समाप्त हुने स्थितिमा पुगेको टिप्पणी गरेकी छन् ।
नेकपा (एमाले) नेपाल समूहको काठमाडौं जिल्ला कमिटीले आयोजना गरेको शपथ ग्रहण समारोहमा बोल्दै नेतृ शाक्यले पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीको सत्ता लिप्साका कारण ठूलो संघर्षपछि स्थापित गणतन्त्र समाप्त हुने स्थितिमा पुगेको बताएकी हुन् । अध्यक्ष ओलीले गणतन्त्र ल्याउनका लागि योगदान गरेका योद्धाहरुलाई कारबाही गरेर आफू सत्ता र कुर्सी जोगाउने खेलमा लागेको आरोपसमेत लगाइन् । ओलीका कारण अहिले पार्टीमात्रै नभई मुलुक नै अप्ठेरो स्थितिमा परेको पनि नेतृ शाक्यले बताइन् ।
उनले भने, ‘कम्युनिष्ट पार्टीमात्रै होइन, मुलुक अप्ठेरोमा परेको छ । सङ्कटमा परेको छ । गणतन्त्र, लोकतन्त्र कमजोर बनाउने उहाँकै कारणले भइराखेको छ र देशको आर्थिक रुपान्तरण, सामाजिक रुपान्तरणको दिशातिर जसरी अगाडि बढ्नु पर्ने हो उहाँकै कारणले भइराखेको छैन । सत्ता लिप्सा, सत्ता लिप्सा, कुर्सी लिप्सामात्रै, अनि गणतन्त्र ल्याउनका लागि बलिदान गर्ने योद्धाहरु, अनि एक जना व्यक्ति सत्ता लिप्सा भएर कुर्ची लिप्सा गरेर गणतन्त्रलाई नै समाप्त गर्ने खालको दुस्साहस गर्ने यो सुहाउने कुरा होइन ।’
अध्यक्ष ओलीमा आफू ठूलो पदमा पुगें भन्ने दम्भ रहेको पनि नेतृ शाक्यले बताइन् । त्यही दम्भका कारण अहिले देश अप्ठेरोमा परेको पनि बताइन् । उनले भनिन्, ‘मलाई लाग्छ उहाँ सच्चिनुहोला जस्तो लाग्दैन । उहाँमा दम्भ छ, घमण्ड छ, उहाँलाई ठूलो पदमा पुगें अब जिन्दगीमा कहिल्यै पुग्ने छैन त्यसैले अब मैले कोसँग माफी माग्ने, कोसँग मैले आफ्नो कमजोर स्थिति बनाउनुपर्छ ? पर्दैन, म ठूलो ठाउँमा पुगें प्रधानमन्त्री जस्तो ठूलो ठाउँमा, पार्टी अध्यक्षजस्तो ठूलो ठाउँमा पुगेँ भनेर उहाँमा जे दम्भ छ त्यो दम्भले आज मुलुक अप्ठेरोमा परेको छ ।’
नेतृ शाक्यले आफूहरु नेकपा एमाले कमजोर भएको हेर्न नचाहेको पनि स्पष्ट पारिन् । तर अहिले अध्यक्ष ओलीले पार्टीलाई विचारविहीन, विधि मिचिएको र विधि समाप्त पार्टीको रुपमा खडा गर्न खोजेको आरोप पनि लगाइन् ।
कार्यक्रममा नेता सुरेन्द्र पाण्डेले अहिले आई लभ यु केपी बा भन्नेहरु यसअघि हाम्रो राजा हाम्रो देश प्राणभन्दा प्यारो छ भन्नेहरु जस्तै हराएर जाने बताए । अवसर खोज्दै हिँडनेहरु अहिले केपी ओलीको पछि लागेको र केही समय पछि उनीहरुले छाडेर जाने निश्चित भएको पनि उनको भनाइ थियो ।
नेता पाण्डेले पार्टीलाई बलियो बनाउने दृढ संकल्पका साथ काम गर्न कार्यकर्ताहरुलाई निर्देशन समेत दिए । उनले पार्टीलाई बिलयो बनाउँदै वामपन्थीबीच, कम्युनिष्टहरुबीच एकता गर्नुपर्ने बताए ।
प्रकाशित : वैशाख ३, २०७८ १९:०४
'फ्लोर क्रस' गर्नेहरूले राजनीतिक अपराध गरे : यामलाल कँडेल
'माधव नेपालसित जोडिएका साथीहरूको राजनीति के रहेछ भन्ने पटाक्षेप भयो'
वैशाख ३, २०७८ जयसिंह महरा
काठमाडौँ — केन्द्रमा एमाले र माओवादीबीच भएको सत्ता भागबण्डामा कर्णाली प्रदेशमा माओवादीका महेन्द्रबहादुर शाही मुख्यमन्त्री बने । सबैभन्दा ठूलो दल बनेपछि कर्णालीको पहिलो मुख्यमन्त्री बन्ने चाहना राखेका एमाले प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल सत्ताधारी दलका नेता हुनपुगे ।
यामलाल कँडेल । फाइल तस्बिर ।
नेकपा रहेकै बेला पनि मुख्यमन्त्रीबाट शाहीलाई हटाएर आफू त्यो पदका पुग्ने धोको कँडेलको थियो । त्यसले केन्द्रीय राजनीति नै तरंगित बनायो । २०७७ कात्तिकमा नेकपा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल कर्णालीलाई लिएर चर्को विवादमा उत्रिए । दोस्रोपटक कँडेलको मुख्यमन्त्री बन्ने धोको पूरा भएन ।
२०७७ फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताइदियो । त्यसको प्रभाव कर्णाली सरकारमा नपर्ने सम्भावना नै थिएन । पहिल्यै दुईपल्ट मुख्यमन्त्री बन्न खोजेका कँडेलले यो मौकाको सदुपयोग गर्नका लागि शाहीविरुद्ध प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराए । उनी प्रस्तावित मुख्यमन्त्री थिए ।
मुख्यमन्त्री बन्ने धोको राखेका कँडेलको तेस्रो प्रयास पनि सफल हुन सकेन । एक सांसदलाई कारबाही गरेर १२ प्रदेशसभाको नेता महेन्द्रबहादुर शाहीले प्रदेशसभाको विश्वास प्राप्त गरे भने १९ प्रदेशसभा रहेका कँडेलले आफ्नै दल सम्हाल्न सकेनन् । एमालेमा जारी ओली र माधवकुमार नेपालको झगडाले कँडेलको मुख्यमन्त्री बन्ने सपना पूरा हुन दिएन ।
शाहीको सरकारमा रहिसकेका नेपाल पक्षका एमाले प्रदेशसभा सदस्यले कँडेलले लगाएको ह्वीप उल्‍लंघन गरे । प्रकाश ज्वाला, कुर्मराज शाही, नन्दसिंह बुढा र अमरबहादुर थापाले मुख्यमन्त्री शाहीलाई विश्वासको मत दिए । यसरी नेकपा (माओवादी केन्द्र) का १२, नेपाली कांग्रेसका ६ र एमालेका ४ सहित २२ जना सांसदको मतले शाहीको पदमात्रै जोगिएन कँडेलको मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो बन्द भयो ।
कर्णाली प्रदेशको यो राजनीतिक अवस्थाबारे कर्णाली प्रदेशसभामा एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलसँग कान्तिपुरका लागि जयसिंह महराले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
कर्णालीको पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिबारे तपाईंको धारणा के हो ?
नतिजा थाहा पाइहाल्नुभयो । उहाँहरू (फ्लोर क्रस गर्ने एमाले सांसद)ले षडयन्त्रपूर्वक ढंगले सहमतिका साथ दलको बैठकमा बसेको देखियो । उहाँहरू पार्टीको दलको भएको हुनाले सहभागी बनाएर १ बजेसम्म सर्वसम्मत ढंगले निर्णय गरिएको थियो ।
प्रकाश ज्वाला राजनीतिक इतिहास बोकेको साथी भइसकेकाले उनले गर्ने थिएनन् । अरुले गर्ने कुरा हुन्थ्यो । उहाँहरूको राजनीतिक अपराधका रूपमा लिन्छु । दल छोड्न सक्छ, राजनीतिक निर्णय गर्न सक्छ, त्यो गरेको भए कुनै आपत्ति थिएन । यो त उहाँहरूले राजनीतिक अपराध गरेर कुनै राजनीतिक भविष्य नदेखेर तत्कालिक फाइदाका लागि त्यस्तो गरेको हो भन्ने लाग्छ ।
फ्लोर क्रस गर्ने सांसदलाई के गर्नुहुन्छ ?
उहाँहरू अब एमाले रहनुभएन । प्रक्रिया पुर्‍याउन बाँकी छ । उहाँहरू एमाले रहनुभएन, रहन सक्नुहुन्न । विधि प्रक्रिया पुर्‍याएर कारबाही हुन्छ ।
कर्णालीमा एमालेले दिएको सन्देश के हो ?
कर्णालीको सामाजिक आर्थिक जुन बनावट छ यसबाट प्रतिनधित्व भएको साथीहरूको प्रतिछायाँ यसमा देखियो । निष्ठा राजनीतिको कुरा देखिएन । अर्को नेकपा एमालेभित्रको जुन संकट देखा परेको छ, अब क्रमश: नेकपा एमालेको माधव नेपालसित जोडिएका साथीहरूको राजनीति के रहेछ भन्ने पटाक्षेप हो । अर्को, कांग्रेस प्रदेशसभामा भाषण गर्दासम्म प्रतिपक्ष प्रतिपक्ष भनिरहेको थियो । प्रतिपक्ष हुँदा पनि सत्तापक्षलाई भोट हाल्ने इतिहासमा नहुने घटना भयो ।
कांग्रेसले निर्णय गरिसकेको थिएन भन्नुभएको हो ?
यो कुरा उहाँ (जीवनबहादुर शाही) आफैले भन्नुभएको थियो ।
एमालेलाई नै सम्हाल्न तपाईंको पहल पर्याप्त नभएको हो ?
आफ्नो दलभित्र विश्वासका साथ उहाँसँग छलफल गरेको थिए । आन्तरिक मतभिन्नताका बाबजुद मेरो अपेक्षा के थियो भने त्यो तहसम्म कदम उठाउनुहुन्न भन्ने थियो । उहाँहरूले नै बैठकमा बारम्बार बताइरहनुभएको थियो । मेरो अरु दलहरूसँग बातचिज र संवाद भइरहेको अवस्था थियो । आफ्नै दलमा केन्द्रित भएर गतिविधि अगाडि बढाइरहेको अवस्था थियो ।
कर्णाली सरकार त जोगियो तर त्यसले एमालेभित्र नै तरंग पैदा गर्‍यो नि, होइन र ?
त्यसको विश्लेषण तपाईंहरूले नै गर्नुस्, के हुन्छ ?
प्रकाशित : वैशाख ३, २०७८ १८:५०